,30,000gbọ elu XNUMX agaghị enwe ike ịdata na ọdụ ụgbọ elu Milan na Linate n'oge oke ọkọchị Italytali
Location: Mbido » Ịdee » Airlines » ,30,000gbọ elu XNUMX agaghị enwe ike ịdata na ọdụ ụgbọ elu Milan na Linate n'oge oke ọkọchị Italytali
Ọdụ ụgbọ elu Milan na ọdụ ụgbọ elu Milan abụghị naanị ezigbo ndị njem mana ọ dịkwa mfe iru site na etiti obodo Milan.
Enwere ọdụ ụgbọ elu atọ maka Milan na Linate bụ onye kacha nso na etiti obodo. Ọ na-ewe naanị minit 15-20 iji ruo na etiti obodo Milan, ịdị kilomita asatọ site na Linate, na njem njem tagzi na-efu euro 8.
Ihe a niile ga-agbanwe n'oge okpomọkụ a.
Linate ọdụ ụgbọ elu Milan ga-emechi ọnwa atọ n'oge ọkọchị maka idozi ụzọ ụgbọ elu ya.
A ga-akwagafe ụgbọ elu 30,000 site na July 27 ruo Ọktọba 27, 2019 gaa ọdụ ụgbọ elu abụọ ọzọ - ọkachasị Malpensa.
Emechi ọdụ ụgbọ elu na-adaba ọdụ ụgbọ elu Milan Linate n'oge oge kachasị na afọ nke afọ, nke pụtara ụgbọ elu 752 na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100,000 oche - naanị n'otu izu site na July 29 ruo 4 August 4, 2019.
Ọ pụtakwara na Malpensa ga-agbari ndị njem 100,000 ruo 120,000 kwa ụbọchị, kama ndị njem 75-80,000 ọ na-emebu kwa ụbọchị.
Ndị njem ga-enwe njem dị ogologo karị, ụgbọ elu ndị dị ọnụ ala adịkwaghị adị ọnụ ala, ebe ọ bụ na njem ndị ọzọ nwere ike ịkwụ ụgwọ dị ka ụgbọ elu - ụgbọ ala tagzi na Milan - Malpensa Airport dị na euro 95.
Mgbe ị laghachitere n'ọnwa Ọktọba afọ gara aga, ị ka nwere ike ide akwụkwọ ụgbọ elu na Milan -Linate with15 ụgbọ elu kwa ụbọchị site na London yana British Airways na Alitalia gaa Linate dịka ọmụmaatụ, ugbu a enwere naanị otu nsogbu, ị gaghị ada na Linate ma ọ bụ pụọ na Linate Airport .
Imirikiti ụgbọ elu ga-agbago ugwu ruo Milan na Malpensa Airport, Varese, na 50 kilomita site na etiti obodo Milan, ma ọ bụ Orio al Serio Bergamo nke dị 60 kilomita site na etiti obodo.
Ọ mara amara na ụzọ ụzọ Linate ga-esi eme ya.
Mana ụgbọ elu na-arụ ọrụ dịka Air France, British Airways, Alitalia, KLM, Iberia, Lufthansa, Scandinavia Airlines, na Brussels Airlines maka ụgbọ elu ndị ereburu adighi na peeji nke ọdụ ụgbọ elu n'afọ gara aga.
Ngagharị a ga - ebute oke nkụda mmụọ n’etiti ndị bịara ezumike
Linate bụkwa ebe dị ezigbo mkpa maka Sardinia nke Air Italy, onye bụbu Meridiana na ugbu a akụkụ nke Qatar Airways. Ọmarịcha agwaetiti nke Sardinia ebe ọtụtụ ndị havetali nwere ụlọ ha na ebe obibi ha bụ ebe okpomọkụ na-ekpo ọkụ ọ bụghị naanị ndị fortali kamakwa maka ọtụtụ ndị ala ọzọ dọtara mmasị na mpaghara ahụ.
Malpensa enwere ike ijikwa njem ụgbọ elu?
Malpensa amaraworị maka ogologo oge ichere maka ibu. Ọ bụ mgbe ọ bụla n'ime isi okwu ọdụ ụgbọ elu, yana ọ nwere ike ọ gaghị aka mma n'oge ọkọchị a.
Ndị njem kwesịrị ịgbakọkwu oge maka ogologo ahịrị na ọdụ nche na nchekwa paspọtụ mgbe ha na-efe efe na Milan n'oge ọkọchị a.
Andrea Tucci, Onye isi nchịkwa ụgbọ elu nke mmepe azụmahịa nke ụgbọ elu SEA - ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ọdụ ụgbọ elu abụọ - kwenyesiri ike na nnukwu ntinye ego na teknụzụ ọhụrụ ga-akwụ ụgwọ maka nnukwu njem ụgbọ elu na Milano na Malpensa.
Agbanyeghị, na ịlele websaịtị gọọmentị nke ọdụ ụgbọ elu Linate, ọ nweghị ihe ekwuru banyere mmechi na-abịanụ na ihe niile yiri ka ọ dị mma. Ruo mgbe ị ruru ebe ahụ.
Ọ bụghị naanị na ọdụ ụgbọ elu ka etinyere ọtụtụ teknụzụ, ọ chọkwara ọtụtụ oche na ebe ichere, ndị ọrụ ndị ọzọ maka nri na ihe ọ beụ beụ na ihe ọveraụveraụ, yana enyemaka ndị njem zụrụ azụ, ebe Malpensa ga-enwe oge ọkọchị na-ekpo ọkụ ma ga-edozi mmụba ndị njem karịrị 25 pasent n'oge ọnwa ọkọchị kachasị elu nke afọ a.
Airport Alitalia Aviation British Airways Brussels Brussels Airlines London Meridiana Milan Qatar Scandinavia
Sarovar Premiere Jaipur họpụtara General Manager
Ndị America kwuru kwụsị ịzụ mmanụ na gas na Rọshịa
Ọsọ Asia-Pacific maka mgbake na-amalite: India, Fiji na…
Amachibidoro ndị egwuregwu Russia na Belarusia na Wimbledon…
Ọmụmụ ihe ọhụrụ maka idobe akwara akwara gị ọcha